Taariikhda My Butros » Top 10 Guddomiyaha Ururka Ragga samee marka aad la xiriireyso Haweenka Online
Last updated: Jan. 28 2020 | 5 min akhri
Halkan waa tobanka wax ugu sareeya waa in aad ka fogaato marka la xiriiraya haweenka online. Tani waxay noqon doontaa shukaansi iyo xiriirka talo internetka ugu muhiim in aad akhriso sanadka oo dhan.
Qalad #1: Iyada diritaanka 'oo kaliya’ wink ah
Sites shukaansi internet Inta badan ha kuu soo diri “baaqaa” ama “xiisaha show” for free.
Laakiin maxay odhan iyada oo adiga kugu saabsan?
Gabar dhab ahaantii kulul Marka gaaro wink, iyada arkaa nin oo aan halis ku saabsan oo raba in iyada la xiriiri iyo aad u raqiis ah in khasnadda ka badan $10 lacagta xubinnimada.
Waa maxay hab la yaab leh si ay u bilaabaan off xiriir. Ma aha!
Waxay sidoo kale og yahay in wink ah waa u fududahay ah “koobiyeyn-baxay”. Qof kasta ugu rogto karaa iyada oo boqolaal bog internet oo u gabgab leeyihiin wax kasta oo dhaqaaqa.
Sidaas, ka aragti, maxaanaan u iyadu waqti aad on markii jira darsin ah guys markii ugu qaadan in baaq loo diro iyada dhabta ah maalin kasta?
Qalad #2: Adoon sawir dhawaan TAYO in aad profile
Mid ka mid Tani waa in si sahlan, laakiin xaqiiqada ah waa, Dadka badankiis ma geliyaan sawiro. The tirakoobka on this mid ka mid yihiin kuwo aad u cad. Taariikh nololeedka la photos heli 10 jeer ka badan looks ka badan kuwa aan; iyo profiles la photos TAYO heli 4 profiles jeer ka badan la sawiro oo liita.
I daaya aan aad weydiiso. Marka aad gasho on goobta haasaawe iyo search, ma waxaad ka raadin loogu tala galay dumarka la sawiro in ay profile koowaad?
Maxaad iyada u ahaan lahaa wax ka duwan?
Dumar badan ayaa u qaadan doonaa in aad qabto wax si ay u qariyaan haddii aadan ku dhejin doonaa sawirkaaga ñ sida laga yaabaa inaad naagtaada.
Haddii aadan jeclaan sawirkaaga, waxay leeyihiin hal qof xirfadle dhigay. Waxaa jira adeegyo badan oo sawir leh, kuwaas oo waxba ma samayn, laakiin abuuro photos weyn ee online aad shukaansi profile.
Haddii aad rabto in aad ku taagan tahay fursad dhanka ah guys kale halkaas, unbaa sawir tayo fiican leh.
Oh, mid ka mid qoraal dheeraad ah oo aad u muhiim ah ñ Hubi in aad sawir la DHAW sameeyo. Wax badan yahay niyad jab badan si uu ula kulmo qof oo ay ogaadaan in sawirka ay aad u soo diray 20 sano iyo 40 pounds ka hor!
Qalad #3: Farriin u diraysaa mawduuc lagu caajiso
Fact #1: Guys tiro bataan gabdhaha ugu yaraan laba ka mid ah on ugu goobaha shukaansiga online iyo in ay dhowr ah oo muxaafid ah.
Fact #2: Gabdhaha raadinaya Good heli daraasiin baaqaa iyo farriimaha in maalin kasta la siiyo.
Waxaad heli kartaa profile ugu cabsida badan oo iyada u soo diri kartaa farriin ugu jiidanaya, laakiin iyadu marnaba u arkaan.
Simple. Mar labaad, Haweenka leh bog internet oo wanaagsan in badan ku baaqaa iyo farriimaha maalin kasta.
Iyada siiya oo sabab ay ugu horreysay ee aad fariin! Waxay leedahay in ay u istaagaan ka mid ah dhammaan dadka kale ee ka soo, ama waxa ay leedahay fursad sare inay is tirtiray oo weligiin akhriyin.
Waqti kaliya sida ugu badan ee la farsameeyo helidda ah line maado jiidanaya sida aad u samayn oo qoraal ah inta kale ee aad fariin.
Weydii iyada su'aal ama si gaar ah tixraaca si faahfaahsan qaar ka mid ah iyada oo profile si ay waxaad ogaan doontaa dhab akhri oo dhab xiiso badan looks iyada oo kaliya.